စာရေးသူရဲ့ Tone ကိုသင်ထောက်ကူစာရွက် 1
အများဆုံးကအဓိကစာဖတ်ခြင်း comprehension စမ်းသပ်မှုတွင်, သငျသညျမေးခွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအခြားအကိုဖတ်ရှုနားလည်နိုင်စွမ်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူစာရေးသူရဲ့လေသံထွက်ရှာဖွေမှဆက်စပ်နှစ်ခုမြင်ရပါလိမ့်မယ် အဓိကစိတ်ကူးရှာဖွေတာ , အခြေအနေတွင်နားလည်မှုဝေါဟာရ , စာရေးဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဆုံးအဖြတ် နှင့် အခြအောင် ။
သင်ဤစာရေးသူရဲ့သေံသင်ထောက်ကူသို့ခုန်မတိုင်မီဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအခန့်ကိုဖတ်ရှု စာရေးဆရာရဲ့လေသံကယ့်ကိုသည်အဘယ်အရာ နှင့် သင်စာရေးဆရာရဲ့လေသံကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပွုနိုငျသည့်လှည့်ကွက်သုံးခု သင်တစ်ဦးသဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသည့်အခါ။
လည်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအတွက်ဤအခမဲ့ print ထုတ်လို့ရတဲ့ pdf file တွေကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ:
စာရေးသူရဲ့ Tone ကိုသင်ထောက်ကူစာရွက် 1 | စာရေးသူရဲ့ Tone ကိုသင်ထောက်ကူစာရွက် 1 အဖြေ Key ကို
ကျမ်းပိုဒ် 1: HG Wells မှကောက်နုတ်ချက် '' အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man
တပါးအမျိုးသားက Bramblehurst ရထားလမ်းဘူတာမှသလိုပဲနှင့်သူ၏ထူလက်အိတ်လက်၌အနည်းငယ်အနက်ရောင် portmanteau တင်ဆောင်လာသောအဖြစ်လမ်းလျှောက်ခြင်း, နှိမ့်ချကျော်, တစ်ကိုက်လေနှင့်တစ်ဦးမောင်းနှင်းကျတစျဆငျ့, wintry နေ့ကဖေဖော်ဝါရီလတဦးတည်းအတွက်စောစောတစ်နှစ်၏နောက်ဆုံးနှင်းရောက်လာတယ်။ သူကခြေမမှဦးခေါင်းမှတက်ထုပ်, သူ၏ပျော့ဝမ်းနည်းဦးထုပ်၏လြှံသူ၏မျက်နှာတိုင်းလက်မသို့ရာတွင်သူ၏နှာခေါင်း၏တောက်ပအစွန်အဖျား၌ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏ မိုဃ်းပွင့်သည်သူ၏ပခုံးနှင့်ရင်ဘတ်ကိုဆန့်ကျင်သူ့ဟာသူပုံ, သူသည်သယ်ဆောင်ထမ်းရသောဝန်တစ်ဦးအဖြူမောက်ကဆက်ပြောသည်ခဲ့သည်။ သူကသလိုပဲအဖြစ်အသက်ရှင်လျက်ထက်ပိုသေလွန်သောသူတို့သည်, ထိုနည်းပြများနှင့်မြင်းသို့နိုင်အောင်ပြင်းထန်စွာ, သူ၏ portmanteau ချပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်။ "တစ်ဦးကမီး" ဟုသူကလူ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို၏နာမ၌ "ဟစျကျွောလေ၏! တစ်ဦးကအခန်းတစ်ခန်းနှင့်မီး! "သူကတံဆိပ်ထုခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်မိုဃ်းပွင့်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ချွတ်ထံမှ bar မှာ, သူ၏ bargain ဒဏ်ခတ်ဖို့သူမ၏ဧည့်ခန်းမသို့မစ္စစ်ခန်းမနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
1. ရေးသားသူအများဆုံးဖွယ်ရှိထားသောစာပိုဒ်တိုများ "အသုံးအနှုန်းများဖို့အဆင်သင့်သဘောတူညီခကျြမြားနှငျ့စားပွဲပေါ်မှာအပျေါမှာပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်ဒင်္ဂါးပြား၏စုံတွဲတစ်တွဲ" ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်သိရှိစေရန်ဘာကိုလိုချင်တာပါသနည်း
ကျမ်းပိုဒ် 2: တစ်ခုကဂျိန်း Austen ရဲ့မာနကနေကောက်နုတ်ချက်နှင့်တစ်ဖက်သတ်အစွဲ
သို့သျောလညျးအနညျးငယျထိုကဲ့သို့သောလူတဦးရပ်ကွက်အတွင်းဝင်ရောက်သူ၏ပထမဦးဆုံးပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်၏ခံစားခကျြသို့မဟုတျအမြင်များကိုမသိ, ဒီအမှန်တရားကိုဒါကောင်းစွာသူကသူတို့သမီးအခြို့သောတဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြား၏ညာဘက်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, ပတျဝနျးကငျြမိသားစုများ၏စိတ်ထဲတွင် fixed ဖြစ်ပါတယ် ။
'' ငါ့အခစျြမစ္စတာ Bennet, 'သည်သူ၏အမျိုးသမီး, တနေ့ကလညျး' 'သင် Netherfield Park ကနောက်ဆုံးမှာငှားရမ်းထားကြောင်းကြားသိကြသလော' '
မစ္စတာ Bennet သူမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
'' ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါသည်, '' သူမပြန်ရောက်; '' မစ္စစ် Long ကအဘို့ရုံကဒီမှာခဲ့, သူကအကြောင်းအားလုံးပြောပြတယ်။ ''
မစ္စတာ Bennet အဘယ်သူမျှမဖြေကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
'' သင်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူကိုသိရန်မလိုချင်သလား ' စိတ်မရှည်, သူ့ဇနီးဟစျကျွောလေ၏။
'' သင်တို့သည်ငါ့ကိုပြောပြချင်, ငါကကြားနာရန်မကန့်ကွက်ရှိသည်။ ''
'' အဘယ်ကြောင့်, ငါ၏ချစ်လှစွာသော, သင်သိရမည်မစ္စစ် Long က Netherfield အင်္ဂလန်၏မြောက်မျက်နှာမှကြီးမားသောကံဇာတာတစ်ဦးလုလင်ကိုယူကြောင်းပြောပါတယ်; သူကတစ်ဦး chaise အတွက်တနင်္လာနေ့ကဆင်း လာ. လေးရာအရပ်ကိုကြည့်ဖို့, သူသည်ချက်ချင်းမစ္စတာမောရစ်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့နိုင်အောင်အများကြီးဝမ်းသာကြောင့်နှင့်အတူရှိ၏မူထသော, သူ Michaelmas မတိုင်မီသိမ်းယူခြင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏ကျွန်အချို့လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးအားဖြင့်အိမျတျော၌ဖြစ်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ''
'' သူ၏နာမသည်အဘယ်နည်း ''
'' Bingley ။ '
'' သူကလက်ထပ်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းပါသလား ''
သေချာစေရန် '' အိုးတစ်ခုတည်း, ငါ၏ချစ်လှစွာသော,! ကြီးမားသောကံဇာတာ၏တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းလူကို; လေးယောက်သို့မဟုတ်ငါးထောင်တစ်နှစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးငယ်တစ်ဒဏ်ငွေအရာကဘာလဲ! '
'ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? ဘယ်လိုကသူတို့ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်? '
'' ငါ့အခစျြမစ္စတာ Bennet, 'သူ့ဇနီး,' သင်မည်သို့ဒါနျပငျပနျးနိုင်ပါတယ် replied? သငျသညျသူတို့ကိုငါသူ၏အိမ်ထောင်ပြုခြင်းတဦးတည်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြရပေမည်။ ''
'' ဤအရပ်၌ဖြေရှင်း၌သူ၏ဒီဇိုင်းကြောင့်လား? ''
'' ဒီဇိုင်း? ဒဏ်ဍာရီ, သင်မည်သို့ဒါစကားပြောရန်နိုငျပါသညျ! ဒါပေမယ့်သူကသူတို့ထဲကတဦးတည်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျစေခြင်းငှါ, သင်တို့အဖြစ်မကြာမီသူလာအဖြစ်သူ့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဟုအလွန်ဖွယ်ရှိသည်။ ''
သူတို့သမီးများအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစီစဉ်ဖို့ကြိုးစားနေမိခင်များဆီသို့ 2. အဆိုပါစာရေးဆရာရဲ့သဘောထားကအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်:
3. အဘယျသို့သေံရေးသားသူအများဆုံးဖွယ်ရှိဝါကျတွေနဲ့သိရှိစေရန်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, "ငါ t ကိုအကောင်းတစ်ဦးကံဇာတာ၏အပိုင်အတွက်တစ်ခုတည်းယောက်ျားသည်မယားကိုလိုသူဖြစ်ရမည်အကြောင်း, တစ်ကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြုနေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်၏။ "
ကျမ်းပိုဒ် 3: Usher ရဲ့အိမ်၏ Edgar Allen ကဖိုး၏ The ကျဆုံးခြင်းမှကောက်နုတ်ချက်
မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ကိုထားပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်အနိမ့်ဆွဲထားသည့်အခါတစ်ဦး, မှိုင်းမှောင်မိုက်နှင့်အယခုနှစ်ဆောင်းဦးရာသီအတွက် soundless နေ့၏တပြင်လုံးကို, အတွင်းမှာကျွန်မတွေ့ရှိခဲ့မြင်းစီး, နိုင်ငံတစ်အာရုံစိုက် dreary ကျေးရွာအုပ်စုမှတဆင့်နှင့်အရှည်မှာတစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းခဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညဦးယံ၏အရိပ် Usher ရဲ့ Melancholie အိမ်၏အမြင်အတွင်းပေါ်တွင်ဆွဲငင်အဖြစ်။ ငါအဆောက်အဦး၏ပထမဦးဆုံးတစေ့တစောင်းအတူ insufferable မှောင်တဲ့သဘောမျိုးငါ့ဝိညာဉ် pervaded ပြုလုပ်ခဲ့-ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမသိရကြ။ ငါ insufferable ဆိုရမည်မှာ, ခံစားချက်အဘို့စိတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်လူဆိတ်ညံလျက်သို့မဟုတ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောသူပင် sternest သဘာဝကပုံရိပ်တွေကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့နှင့်အတူကဗြာဆနျ, စိတ်ဓါတ်များကြောင့်, ထိုဝက်ပျြောမှေ့စမဆိုအားဖြင့် unrelieved ခဲ့သည်။ ငါမျှသာအမျိုးအပေါ်သို့ငါ့ကို-နှင့်ဒိုမိန်း-ပေါ်မှာဖှယျနံရံများ-ပေါ်မှာလစ်လပ်မျက်စိကဲ့သို့ပြတင်းပေါက်-အပေါ်သို့အနည်းငယ်ရာထူး sedge-နှင့်လောင်းပုပ်ပျက်သွားသစ်ပင်အနည်းငယ်အဖြူစည်အပေါ်သို့၏ရိုးရှင်းရှုခင်း features တွေရှေ့တော်၌ထိုမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှု ငါကပိုစနစ်တကျပြီးနောက်-အိပ်မက်တိုင်းရက်ကြာသို့ဘိန်း-ခါးချုံးပေါ်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အသက်-The ကုလားကာအကျည်းတန်ကျဆင်းထက်မမွကွေီးအာရုံခံစားမှုမှနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အသက်ဝိညာဉ်တစ်ခုပြင်စိတ်ကျရောဂါ -with ။
တစ်ဦး iciness တစ်နစ်မြုပ်, ထိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းအဘယ်သူမျှမတုတ်ချွန်ယင်းသူတော်ကောင်းတရား၏တစုံတခုသို့ညှဉ်းဆဲနိုင်သောနှလုံး-တစ်ခုအတွေး၏ unredeemed dreariness ၏ဆီးရီးယားနဲ့အစ်စရှိခဲ့သည်။ -ငါကထင်-အရာကိုဒါ Usher ရဲ့အိမ်၏စဉျးစားဆငျခွ၌ငါ့ကို unnerved ခဲ့ဘယ်အရာကိုခေတ္တရပ်တန့်ခဲ့သလဲ
4. ဆောင်းပါး၏သေံထိန်းသိမ်းနေစဉ်အောက်ပါရွေးချယ်မှု၏ဘယ်, စာသားအတွက် စုပေါင်း. ရေးသားသူရဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကအကောင်းဆုံးအဖြေပေးသည်?
ခဒါဟာနေ့၏ dreariness ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းကိုအဘယ်အရာကိုမျှအထူးသဖြင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
C. ဒီဖြေရှင်းချက်ငါ့ကိုကြိမ်းပ။ ငါသည်ငါ့မျက်၏စိတ်နှလုံးမှာမရနိုင်ဘူး။
ဃဒါဟာငါဖြေရှင်းနိုင်ဘူးနက်နဲသောအရာတခုကိုရှိ၏ မဟုတ်သလိုငါလုံ့လဝိရိယအဖြစ်အကြှနျုပျအပျေါစည်ကားသောနေရာ၌ Fancy နှင့်အတူထွေးနိုင်ဘူး။
မည်သို့3လ Away ဖြစ်ပါတယ်ဒါကစမ်းသပ်သည်ကိုပြင်ဖို့
ပင်မ Idea သင်ထောက်ကူစာရွက်3ဖြေ Key ကို
8 ဂန္ထဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာ Epic
အိန်ဂျယ်တှေ့ဆုံအပေါ်ဂျုံး Wester Anderson က
တစ်နုတ်မ Chord Created ပုံ
27 မမေ့နိုငျဖှယျ Katharine Hepburn Quotes
ရင်ပြင်မြစ်များ, Cube မြစ်များနှင့် Excel ကိုအတွက် nth မြစ်များရှာဖွေခြင်း
KOZLOWSKI - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
Czar က Nicholas ရုရှား II နှင့်သူ့မိသားစုလူသတ်မှု
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတစ်ရပ်အမိန့် Get လုပ်နည်း
ဘယ်အင်တာဗျူးပွုလုပျခွငျးအဘို့အ သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည် - မှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ် Recorder?
အပြည့်အဝပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: 2008 ဟွန်ဒါ CBR1000RR
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇီဝဗေဒအတွက် directional ရွေးချယ်ရေး
လာ့စ်ဗီး acciones ejecutivas က de သမ္မတအိုဘားမား tras ဆုံးဖြတ်က de Corte Suprema
ရေငုပ်အဘို့အခကျခဲဇယား၏ FINA ရဲ့ဘွဲ့ကိုနားလည်ခြင်း
အလေ့အကျင့်မှတ်စုများ: ပွား & အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ်ဂျော့ခ်ျဂျီ Mead